Somali- Warbixinta KORONA FAYRAS - Cardiff Community Housing Association
Somali- Warbixinta KORONA FAYRAS
Home>Somali- Warbixinta KORONA FAYRAS
Somali- Warbixinta KORONA FAYRAS	Justine Wilcox	2020-04-09T11:43:20+00:00
Farriin ka timid Hayley Selway, Madaxa Fulinta
ogeysiiska Ra’iisul Wasaaraha Boris Johnson waxaa noo sii dheer inaan u wareegeyno adeegga dayactirka degdega ah. Waxaan kaa codsan lahayn dulqaadkiinna intii lagu jiro waqtigaan adag. Waxaan wali samayn doonnaa hubinta badbaadada sidaas darteed fadlan noo oggolow inaan sameyno waxyaabo ay ka mid yihiin adeegga gaaska ee gurigaaga. Qandaraasleyaashayada iyo shaqaalahayagu waxay sameeynayaan taxaddar kasta si ay u ilaaliyaan badbaadadaada iyo nabadgelyadooda. Kooxdayada nadiifinta, Dazzle waxay samayn doonaan nadiifinta aagagga la wadaago haddii aad ku nooshahay guri dabaq ah. Waxay isticmaali doonaan waxyaabaha ka hortaga fayraska inay ku tirtiraan sagxadaha. Tani waxaa loogu tala galay in lagu sugo nabadgeliyadaada. Fadlan sii wad dhaqitaanka gacmahaaga kahor iyo kadib markaad soo marto meelaha la wadaago ee dhismaha. Haddii aad dhibaato kala kulanto bixinta kiradaada fadlan ha walwelin oo na soo wac si aan arrintan uga wada hadalno. Caafimaadkaaga iyo badbaadadaada ayaa ah ahmiyadeena koowaad sidaas darteed fadlan guriga joog laakiin nala soo xiriir si aad noogu soo wargaliso sida aad dareemayso adigoo isticmaalaya taleefanka, barta internetka ama Facebook. Ka digtoonow wicitaan kasta oo taleefoon ah iyo soo booqdayaalba ee shakiga leh. Ugu dambeyntiina fadlan ku joog nabadgeliyo. Wax walba ayaa maalinba maalinta ka dambaysa isbeddelaya waxaanan ku dadaali doonnaa sidii aannu uga jawaab celin lahayn arrintan, annagoo ka shaqeyna danahaaga.
Waxaan rabaa inaan kuu xaqiijiyo inaan si aad ah ugu dadaaleyno sidii aan u joogteyn lahayn howlaheenna isla markaana aan u qaadi lahayn tallaabooyin lagu ilaalinayo caafimaadkaaga iyo amnigaaga, iyo sidoo kale shaqaalahayaga iyo qandaraasleyaashayada.
Si loo ilaaliyo adiga iyo shaqaalahayaga, iyo si loo raaco hagida Dowlada, waxaan go’aansanay inaan qaadno talaabooyinka soo socda:
Xarunta Adeegga Macaamiisha, Xafiiska Madaxa iyo Xarumaha Bulshada
Dhismooyinkan soo socda waa la xiri doonaa, wayna xirnaan doonaan illaa ogeysiis dheeri ah laga helo:
Xarunta Adeegga Macaamiisha ee Meteor Street Adamsdown;
Xaffiks Madaxa, Tolven Court
Xarumaha Bulshada ee Trowbridge iyo Tremorfa. Xarunta Dhaqanka iyo Saxaafadda (CMC) ee ku taala dabaqa koowaad @Loudoun
Kulamada kiraystayaasha iyo bulshada sidoo kale dib ayaa loo dhigi doonaa.
Waxaan halkaan u joognaa inaanu caawinno fadlan naga soo wac 029 2046 8490 haddii aad u baahan tahay inaad nala hadasho.
Isbedelada Adeegyada Dayactirka
Ma jiri doonaan wax dayactir ah oo qorsheysan, dayactirka joogtada ah, dayactir aan daruuri ahayn ama booqashooyin oo la soo saari doono, la diiwaangelin doono ama la samayn doono wixii laga bilaabo Talaadada 24-ka Maarso, 2020. Dayactirka degdega ah ayaa sii socon doona.
Isbedeladaani waxay ka dhigan yihiin inaan diirada saari karno inaan ku caawino iyo oo aan xallino arrimo badan ee aan awoodno iyadoo la isticmaalayo taleefanka. Kaliya waxaan ku soo wici doonaa si aan kuu aragno haddii ay jiraan duruufo aad u kooban, tusaale ahaan haddii ay jiraan dayactirka degdega ah.
Waxaan jeclaan lahayn inaan kuu xaqiijinno inaan si joogto ah dib-u-eegis ugu sameyneyno talobixinta ka socota Dowladda oo aan sii wadi doonno inaan u bixinno adeegyada si waafaqsan macluumaadka dowlada laga helo.
Waad ku mahadsan tahay ka qeybqaadashadada.
Balanteyda dayactireed ee aan la leeyahay qandaraasle ama kooxda dayactirka guriga weli ma sii socon doontaa?
Inaad gurigaaga nabadgeliyo ku hesho ayaa weli ahmiyadeena koowaad ah.
Laga bilaabo Talaadada 24-ka Maarso 2020, waxaan sameyn doonaa isbeddelo habka aan u sameeyno dayactirka. Ma jiri doonaan wax dayactir ah oo qorsheysan, dayactirka joogtada ah, dayactir aan daruuri ahayn (sarkaalka dayactirka) booqashooyin oo la soo saari doono, la diiwaangelin doono ama la samayn doono. Dhamaan shaqooyinka iyo ballamaha joogtada ah ee qaybahaan waa la kansali doonaa ilaa laga helo ogeysiis dambe. Dayactirka degdega ah wali waa la fulin doonaa
Muhiimadeena waa sii wadida bixinta adeegyada dayactirka ee deg-degga kuwaas oof waafaqsanaan sharciga (Adeegyada Gaaska, Qiimaynta Khatarta Dabka iwm).
Haddii mid ka mid ah qandaraasleyaasheena uu imaanayo gurigaaga si uu u fuliyo adeeg, sida badbaadada gaaska ama tijaabada korantada ama xaalad deg deg ah ama dayactir deg deg ah waa muhiim inaad noo ogolaato inaan galno guriga si aan u dhameystirno shaqooyinka.
Ma ii sheegi kartaa siyaabaha kala duwan ee aan ku bixin karo kirada haddii aanan ka bixi karin guriga sababo la xiriira cudurka korona fayras?
• Adigoo isticmaalaya Akoonkdayga ee: www.ccha.org.uk, nidaamkeena lacag bixinta ee onleenka ah, adigoo isticmaalaya kaarkaaga deynta ama wax iibsiga. Waxaad u baahan doontaa lambarka tixraaca ee kiradaada. Tani waxaa laga heli karaa bayaanka kiradaada. Inaad qaabkaan u bixiso waa bilaash oo waxaa la heli karaa toddobo maalmood usbuuciiba. OGSOONOW in adeegga aan la heli karin inta u dhaxaysa saacadaha 11:00 PM iyo 02:00 AM habeen kasta
Lacag Bixinta Khadka Tooska ah: tani waa habka ugu fudud ee lagu bixiyo kiradaada. Fadlan nagala soo xiriir 029 2046 8490 si aad Lacag Bixinta Tooska ah ugu hagaajisato taleefanka. Waad dooran kartaa lacag bixinta ah toddobaadle, laba toddobaadle, afar toddobaadle ama bil kasta.
Waxaad ku bixin kartaa taleefanka 029 2046 8490.
Waxaad ku bixin kartaa wareejinta bangiga ama lacag bixinta BACS. Faahfaahinta Bangigayagu waa:
Magaca akoonka: Cardiff Community Housing Association Ltd
Lambarka Akoonka: 80048704
Koodhka Kala sooca (Sort Code): 20-18-23
Loo-shaqeeyahayga wuxuu ii sheegtay inaan shaqada imaanin sababo la xiriira cudurka korona fayras. Dakhligeyga bishaan ayaa saameyn soo gaari doonta – wali miyaan u baahanahay inaan kirada bixiyo?
Waxaad wali u baahan doontaa inaad u bixiso kiradaada sidii caadiga ahayd laakiin waxaan fahamsanahay in faafitaanka cudurka korona fayras ee ku faafay UK inuu saameyn ku yeelan karo daqligaaga. Fadlan nagala soo xiriir 029 2046 8490 haddii aad u maleynaysid inaad dhibaato ku qabtid bixinta kiradaada.
Haddii aad tahay shaqaale oo aad shaqaysato ugu yaraan £ 118 asbuucii, waxaad xaq u leedahay in Mushahaarka Fasaxa Jirada (SSP) lagu siiyo. Badanaa waa inaad maqnaataa ugu yaraan afar maalmood oo isku xigta, laakiin Dowladda ayaa ku dhawaaqday in SSP la bixin doono maalinta koowaad haddii aad xannuunsato oo xanuunkaagana uu la xiriiro cudurka korona fayras. Haddii aadan xaq u lahayn SSP, waxaa suuragal ah inaad codsato gunnooyinka kale.
Haddii aad jeclaan lahayd inaad hesho talo dheeri ah oo ku saabsan sheegashada gunnooyinka fadlan kala xiriir Kooxda La-talinta Lacagta 02920 468493 ama la xiriir hay’adda la-talinta ee deegaanka sida CAB, Hoyga, ama DWP. Haddii kale waxaad kooxda iimeyl ugu soo diri kartaa booqo@ccha.org.uk waxaanan kugu soo laaban doonnaa sida ugu dhakhsaha badan ee suurogalka ah. Fadlan la soco, waxaan helnaa wicitaano aad u tira badan inta u dhexeysa 9ka subaxnimo ilaa 11 subaxnimo sidaa darteed waxaa ugu wanaagsan in aadan soo wicin waqtiyadan haddii aad awoodo.
Xarunta Adeegga Macaamiisha ee Meteor Street, Adamsdown ma furnaan doontaa?
Iyada oo la raacayo tilmaamaha cusub ee aan helnay 16-kii Maarso 2020, waxaan go’aansannay in la xiro xafiisyadeena ku yaal Meteor Street, Adamsdown, iyo Tolven Court, Splott laga bilaabo Arbacada 18-ka Maarso. Tan waxaa loogu talagalay in lagu ilaaliyo adiga iyo shaqaalaheenna. Hadaad u baahan tahay inaad nala soo xiriirto fadlan naga soo wac 029 2046 8490 si aan kuu caawino. Waxaan heysanaa shaqaale diyaar u ah qaadista lacag bixinta kirada, iyo dayactirka degdega ah.
Waxaa la gaaray wakhtigii aan soo wareejin lahaa furayaasha si aan u joojiyo kiradeyda, maxaan sameeyaa?
Fadlan nagala soo xiriir 029 2046 8490
Waxaan saxiixi rabaa oo aan u guuri rabaa gurigayga cusub. Tani wali ma sii socon doontaa?
Fadlan nagala soo xiriir 029 46 8490
Meelaha la wadaago ee guryaha dabaqa ah weli ma la nadiifin doonaa?
Amnigaaga awgiis waxaan weydiisannay qandaraasleheenna nadaafadda inay sii wadaan howlaha nadaafadda kaasoo gacan ka geysan doona xaddidaadda faafitaanka cudurka korona fayras. Waxay nadiifinayaan dhamaan meelaha la taabto sida albaabada iyo gacan qabsiga albaabada. Waxay sameeynayaan dhammaan taxaddarrada lagama maarmaanka ah, iyagoo isticmaalaya galoofyada gacanta, daawada gacanta iyo alaabada kale. Waxay baarayaan dhammaan shaqaalaha ka hor intaanay u bixin shaqada si ay u hubiyaan inaysan qabin wax astaamo ah. Intii waqtigu uu sii socdo, xaaladaha qaarkood waxaa laga yaabaa inay xirtaan maaskaro. Haddii aad go’aansato inaad is karantiisho, waxay kaa qaadayaan qashinka haddii si fiican loo xiro oo aad uga tagto bannaanka hore ee guriga. Waxaan ku faraxsanahay, in shaqaalahooda ku heelan sii wadida taageerada qaabkaas ay nagu siinayaan dhammaanteen.
Xarumahayaga iyo dhismayaasha bulshada ee ku yaala Loudon Square ma saameyn doonaan?
Sida xafiisyadeenna ku yaal Meteor Street iyo Tolven Court, waxaan sidoo kale xireynaa Xarumahayaga xaafadaha Loudon Square, Trowbridge iyo Tremorfa laga bilaabo Arbacada 18-ka Maarso 2020. Haddii aad ballan ka qabsatay mid ka mid ah goobahaas waan kula soo xiriiri doonnaa maalmaha soo socda.
Waxaan u maleynayaa in qof ku jira guriyaha ku yaala dabaqeyga inuu ku dhacay cudurka korona fayras, maxaan sameeyaa?
Haddii aad u maleynaysid inaad xiriir dhow la leedahay qof qaba korona fayras kaas oo la xaqiijiyay, booqohttps://www.gov.uk/government/topical-events/coronavirus-covid-19-uk-government-response
si aad u ogaato waxa la sameeyo.
Talada Dowlada ee looga hortagayo faafitaanka ayaa ah sida soo socota:
• Dhaqitaanka gacmahaaga inta badan adigoo isticmaalaya saabuun iyo biyo ugu yaraan 20 ilbiriqsi. Isticmaal daawada lagu nadiifiyo gacmaha ee ka samaysan alkolo taas oo ka kooban ugu yaraan 60% aalkolo haddii saabuun iyo biyo aan la heli karin
• Iska ilaali inaad gacmahaaga, sankaaga iyo afkaaga ku taabato gacmahaaga aan nadiifsanayn
• Iska ilaali inaad u dhowaato dadka kale
• Haddii aad caafimaad daro dareento, guriga joog oo ha aadin shaqo ama dugsi
• Ku dabool qufacaaga ama ku hindhisto istiraaasho ka dibna ku tuur weelka qashinka ka dibna dhaq gacmahaaga isla markiiba
• Nadiifi oo si joogto ah jeermiska uga dil walxaha iyo meelaha inta badan la taabto ee guriga iyo goobta shaqada ah
CCHA waxay raaci doontaa wixii talo ah ee ay bixiso Dowlada kadib markii dhismaheena laga helo qof la xaqiijiyey ee qaba cudurka loo yaqaan korona fayras.
Mudo intee leeg ayay qaadanaysaa intaanu dib u bilaabin adeegyadii caadiga ahaa kadib markii la xirey ama xayiraad la saaray adeegyada?
Waxaan si dhow ula socon doonnaa talo bixinta Dowladda waxaanan isku dayi doonnaa in sida ugu dhakhsaha badan aan dib ugu bilowno adeegyadii caadiga ahaa.
Waxaan fahamsanahay inay kugu adkaaneyso bixinta kiradaada waqtigan waxaan rabnaa inaan ku caawino. Waxaa laga yaabaa inaad shaqadaada ku weyday cudurkaan korona fayras dartiis, inaad iskaa u shaqeysato ama kula soo gudboonaadey isbeddelo kale oo duruufaha ah oo micnaheedu tahay inay lacag yar ku soo galayso.
Fadlan naga soo wac telefoonka 029 2046 8490 si lagaaga caawiyo bixinta kiradaada, talobixinta lacagta ama sheegashada gunnooyinka sida Universal Credit (Deynta Caalamiga Ah). Waxaan haysannaa shaqaale diyaar u ah inay ku caawiyaan. Waxaad gujin kartaa lifaaqaan: Talao Bixin Lacageed si aad u hesho caawimaad iyo talooyin dheeraad ah
Siyaabaha lagu bixiyo Kiradaada adigoon guriga ka bixin
Haddii aad haysato kaarka AllPay oo leh lambarka tixraaca ee 19-ka lambar, waxaad u isticmaali kartaa adeegyada AllPay inaad ku bixiso kiradaada qaababkan soo socda. Haddii aadan haysan Kaarka AllPay waxaan kuu dalbi karnaa in mid laguugu keeno gurigaaga, fadlan ka wac Kooxda Adeegyada Macaamiisha 029 2046 8490.
Khadka taleefanka lacag bixinta AllPay ee 24 saac ah 0844 557 8321. Waxaad u baahan doontaa kaarkaaga AllPay oo leh koodhka 19-ka lambar ah iyo kaarkaaga deynta iyo kaarka was iibsashada.
Qoraal ahaan adigoo isticmaalaya taleefan kasta oo leh kaarka wax iibsashada ama deynta, si fudud isku diiwaangeli oo waxaad kiradaada ku bixin kartaa adigoo qoraal ahaan u soo diraya koodhka iyo qadarka lacagta ee aad rabto inaad ku bixiso lambarka loogu talagalay. Isdiiwaangeli si aad lacag bixin qoraal ah ugu sameeyso: LACAG BIXIN QORAAL AH
AllPay Apwhich waxaa lagu soo dejin karaa oo lagu isticmaali karaa aaladaha Apple iyo android adigoo kala soo degaya Apple Store ama Google Play. Guji: SOO DEGSO ABLIKEESHANKA si aad u soo degsato ablikeeshanka
Dhibcaha lacag bixinta ee AllPay ee laga helo dukaan kasta ama Xafiiska Boostada kaas oo ay ka muuqato astaanta Pay Point:
Talada dawladu waxay tahay inaad u baxdid banaanka kaliya haddii ay jiraan sababo daruuri ah. Waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho mid ka mid ah hababka kale ee lacag bixinta si aad u bixiso kiradaada. Waqtigaan, ikhtiyaarada ah in sidaan loo bixiyo ayaa waxaa go’aamin doona dukaanada shaqsiyadeed iyo Xafiisyada Boostada waxayna u badan tahay inaadan ku bixin karin lacag caddaan ama kaash ah.
Weli waxaad bixin kartaa kiradaada haddii aadan lahayn kaarka AllPay adigoo isticmaalaya siyaabaha soo socda:
Wac Kooxdeena Adeegyada Macaamiisha ama Sarkaalkaaga Guryaha oo iyagu ayaa kaa qaadi kara lacagta iyadoo la isticmaalayo kaarkaaga deynta ama wax iibsiga. Naga soo wac 029 2046 8490.
Adigoo isticmaalaya Akoonkayga, nidaamkeena lacag bixinta ee onleenka ah, adigoo isticmaalaya kaarkaaga deynta ama wax iibsiga. Waxaad u baahantahay lambarkaaga kiraysiga (waxaad ka heli kartaa Bayaanka Kiradaada. Tani waa bilaash oo waxaa la heli karaa toddobo maalmood usbuuciiba. OGSOONOW in adeegga aan la heli karin inta u dhaxaysa saacadaha 11:00 PM iyo 02:00 AM maadaama lagu sameynayo keydin
Lacag Bixinta Khadka Tooska ah: tani waa habka ugu fudud ee lagu bixiyo kiradaada. Markaad buuxiso foomka deynta tooska ah uma baahnid inaad wax kale sameyso. Waxaan xisaabin doonnaa lacagtaada billaha ah oo waxaan si toos ah uga dalban doonnaa lacag bixinta baankaaga ama bulshada dhismaha bil kasta. Fadlan nagala soo xiriir 029 2046 8490 si aad u hesho foomka lacag bixinta tooska ah ama in lagaa caawiyo sameynta akoon bangi
Wareejinta lacagta bangiga ama lacag bixinta BACS. Faahfaahinta Bangigayagu waa:
Fadlan xaqiiji in aad kudarto lambarkaaga kiraysiga marka aad samayneysid lacag wareejinta bankiga si aan u ogaano cida lacagta bixinaysa.
Miyaad ka walwalsan tahay sida cudurka korona fayras uu u saameyn doono lacagtaada?
Kooxdayada La-talinta Lacagta waxay soo diyaariyeen guudmar si ay isugu dayaan inay ku caawiyaan.
Macluumaadkan si joogto ah ayaa loo cusbooneysiin doonaa markaa fadlan dib u eeg wixii warbixin ah oo cusub.
Haddii aad jeclaan lahayd inaad qof si faahfaahsan ula hadasho, fadlan soo wac 029 2046 8493 ama farriin WhatsApp ugu dir 0796 662 5678 waanuna ku soo wici doonnaa.
XASUUSNOW- Haddii aad raacayso hagida dawladda sababtuna ay tahay inaad qabto astaamaha cudurka korona fayras, ama haddii aad is karantiileysid sababtuna ay tahay inaad xariir dhow la samaysay qof qaba astaamaha cudurka, waxaa laguu tixgelinayaa inaadan ku habboonayn shaqo.
Dawladdu waxay ku dhawaaqday inay shaqaalaha siin doonto mushahaar iyada oo loo marayo nidaamka shaqo ku haynta ee loogu talagalay inta uu socodo korona fayras, haddii ganacsiga uu ku qasbanaadey in si ku meel gaar ah loo xidho. Tani waxaa ka faa’ideysan kara qof kasta oo ka diiwaangashan barnaamijka PAYE laga bilaabo 28ka Febraayo 2020. Loo-shaqeeyahaagu waa inuu la xiriiraa HMRC si uu ugu qalmo.
Haddii shaqadaadii marhore aad lumisay, la xiriir loo shaqeeyahaaga oo weydii in ay ku dib kuu shaqaaleysiin karaan shaqaale fasax ku jira ahaan.
Haddii aad mar hore gudbisatay sheegashada gunnooyinka, fadlan toos ula xiriir waaxda gunnooyinka si aad talo uga hesho.
Haddii aad shaqeyso oo aad u baahan tahay inaad fasax ka qaadato shaqada, waa inaad ahaataa mid u qalma Fasaxa Jirada ee Mushahaarka Leh (SSP) laga bilaabo maalinta ugu horeysa ee aad shaqada ka maqantahay. Waxaad u baahan tahay inaad arrintaas kala hadasho loo-shaqeeyahaaga. Haddii aad shaqaysato ugu yaraan £ 118 asbuucii (£ 120 laga bilaabo Abriil 2020) waxaad xaq u leedahay SSP oo ah £ 94.25 toddobaadkii (£ 95.85 laga bilaabo Abril 2020) illaa 28 toddobaad, oo lagu siiyo maalinta ugu horreysa ee aad xannuunsato.
Tani waxay sidoo kale khusaysaa haddii aad ku jirtid heshiiska saacadaha shaqada ee aan xadidneyn.
Haddii aad dhib ku qabtid codsashada SSP waxaad kala xiriiri kartaa kooxda HM 03000 560 630
Haddii lagaa codsado inaad qaadato fasax aan mushahaar lahayn, waxaad u qalmi kartaa Lacagta Dammaanad-bixinta. Booqo www.gov.uk/lay-offs-short-timeworking si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Ma adiga isku shaqeeya?
Dowladda ayaa ku dhawaaqday inay ilaalineyso dadka iskood u shaqeysta. Waxaad u baahan tahay inaad dhammaystirtay soo-celinta canshuurta ee 2018/2019, markaa midaan ma quseyso dadka bilaabey inay iskood u shaqeystaan wixii ka dambeeya Abriil 2019. Booqo https://www.gov.uk/government/news/chancellor-gives-support-to-millions-of-self-employed-individuals si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Haddii aad iskaa u shaqeysato xaq uma lihid SSP.
Si kastaba ha noqotee, haddii aadan ku habboonayn shaqada, waxaad dalban kartaa Gunnada Taageerada & Shaqada ee nooca Cusub (New Style Employment & Support Allowance (ESA) ama Deyn Bixinta Caalamiga Ah (Universal Credit). Uma baahnid inaad keento Qoraalka cadeynta Ku haboonaanshaha Shaqada si aad u codsato.
Si aad u codsato ESA, wac Jobcentre Plus 0800 169 0350 ama kala soo deg foomka ESA1 bogga www.gov.uk
Si onleen ah u codso Deynta Caalamiga Ah www.universal-credit.service.gov.uk ama wac khadka caawinta ee 0800 328 5644
Haddii aad caafimaad qabtid, laakiin shaqadaadu ay istaagtay sababo la xiriira korona fayras, waxaad codsan kartaa Deynta Caalamiga ah (Universal Credit). Adiga (iyo lammaanahaaga) waa inaad haysataan wax ka yar £ 16,000 oo kayd ah. Inta aad xaqa u leedahay waxay ku xiran tahay duruufahaaga, tusaale ahaan, inaad leedahay kharashka guryeynta ama carruur. Isticmaal qalabka xisaabinta gunnooyinka ee onleenka ah si aad u aragto intaad heli karto.
Haddii aad ka walwalsan tahay bixinta canshuurtaada ganacsiga, waxaad wici kartaa Khadka HMRC ee Korona Fayraska 0800 024 1222. Dowladda ayaa ku dhawaaqday in Qiimeynta Xigta ee bixinta Canshuur celinta la joojiyay illaa Janaayo 2021.
Deynta Caalamiga Ah (Universal Credit)
Gunnada aasaasiga ah ee Universal Credit ayaa lagu kordhiyey £ 1,000 sanadkiiba 12ka bilood ee soo socda. Tan macnaheedu waa korodh ah £ 20.00 isbuuciiba laga bilaabo 6-da Abriil 2020, ee loogu talagalay dhammaan sheegashooyinka Deynta Caalamiga ah ee hadda jira iyo kuwa cusub, iyo Deynta Cashuurta Shaqada.
Haddii aad dalbaneysid UC oo aadan shaqeyn karin waa inaad u sheegtaa tababarahaaga shaqada. Balanqaadyada qofka sheegashada soo gudbisanaya ayaa dib loo eegi doonaa laakiin ma wajihi doontid ciqaab haddii lagugula taliyo inaad karantiil gasho.
Haddii aad u joogtid guriga sababo la xiriira korona fayras lagaama filayo inaad shaqo raadsato.
Xarunta Shaqada ayaa kugula talisay inaadan lagaa filayn inaad timaadid ballamo waji ka waji ah. Bedelkiisana waxaa laga yaabaa inay ​​wareysiyada kaaga qaadaan taleefanka.
Haddii aad codsi cusub u samaynayso Universal Credit, waxaa lagaa codsan doonaa inaad dhammaystirto wareysi taleefanka ah si aad u dhammaystirto sheegashadaada. Waa inaadan ka daahin inaad dalbato Universal Credit, laakiin waad awoodi kartaa inaad dib uga codsato sheegashadaada haddii daahitaanku uu sabab u ahaa cudurka korona fayras
Deymaa Canshuuraha Shaqada
Haddii aad heshid deymaha Canshuuraha Shaqada, oo aad aragtay saacadahaaga in la yareeyey, ama si ku meel gaar ah shaqada lagaa saaray, uma baahnid inaad isbedelkaan u soo sheegto HMRC. Si kastaba ha noqotee, haddii uu jiro isbeddel joogto ah oo dhanka saacadaha shaqadaada ah, waa inaad u sheegtaa HMRC sida ugu dhakhsaha badan ee suurogalka ah. Booqo https://www.litrg.org.uk/latest-news/news/200331-how-do-work-changes-affect-tax-credits si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Haddii aad sugeysay qiimeyn caafimaad oo waji-ka-waji ah si aad u hesho Lacag-bixinta Madax-bannaanida Shakhsiyeed, Gunnada Shaqaalaynta & Taageerada, ama Deynta Caalamiga ah, kuwan ayaa la joojiyay ugu yaraan illaa bartamaha bisha Juun. Waxaa laga yaabaa inaad bedelkooda samaysid wareysi taleefan ah. Lacag bixintaada wax saameyn ah kuma yeelan doonto.
Tani waxaa ka mid ah sheegashooyinka cusub ee Lacag Bixinta Madax-bannaanida Shaqsiyeed, Gunnada Shaqaalaynta iyo Taageerada, iyo Deynta Caalamiga Ah.
Ma jiri doonaan dib-u-eegisyo cusub ama dib-u-qiimeynno lagu sameeynaayo gunnooyinka naafonimada illaa muddo saddex bilood ah. Haddii gunnadaadu ay dhamaad ahayd, DWP ayaa dheereysey taariikhaha dhamaadka si loo xaqiijiyo in lacagtaadu aysan saameyn ku yeelan waqtigaan.